Ukulunywa we sezinwele - lokhu kuyinkinga yangempela kubantu abaningi. Ezinye amashampu ayifanele nhlobo, abanye ngalesi siyingi kubangele ubuhlungu futhi dandruff. Kodwa isikhumba enempilo futhi izinwele enempilo - lawa imiqondo emibili nolimi. Shampoo ngoba isikhumba ebucayi ikhanda akulula ukukhetha, ngoba ngamunye wethu ihlukile, futhi yini ezé ngayo, kungaba kuphela babhebhethekisa inkinga omunye. Namuhla sibheka izindlela eziyisisekelo zokusebenzisa ekunakekeleni inkinga isikhumba, kanye amathuluzi engcono ukuthi kukhona ekahle kuwe.
Shampoo for ekhanda ebucayi kufanele yenziwe ngezithako zemvelo. Ideal - iyona surfactants ukuthi ngomusa ahlanze sezinwele. Ethandwa kakhulu babo ezikhishwe kakhukhunathi. Nokho, kakhukhunathi eyodwa kuphela hhayi ukuhlinzeka ukunakekelwa emnene, ngakho ingxenye kufanele lifake panthenol. Isebenzisa ibhalansi ephelele kwesikhumba.
Nakani nezinye izingxenye ukuthi zifakwe imoto ngoba ekhanda ebucayi. Kuhle kakhulu, uma kukhona ingxenye izimali has Aloe kanye allantoin futhi bisabolol. Bonke bangabangasokile ngendlela eziyinkimbinkimbi baqinise futhi ubuyisele umsebenzi zemvelo ayisivikelo isikhumba, ukuze ingakwazi ukubhekana izici zangaphandle hhayi zisuse ezishukumisa ububomvu nokuxebuka. Lokhu Shampoo kwenza enakekela izinwele futhi anikeze ubumnandi hhayi kuphela umphefumulo, kodwa futhi ngemva kwalo.
ukunakekelwa olunzulu kuhilela ukusetshenziswa hhayi kuphela ithuluzi ezifana imoto ngoba ekhanda ebucayi, kodwa nakwezinye imikhiqizo yezimonyo. Kuyadingeka ukugeza emva ukusetshenziswa buso ekhethekile, balms. Ngokwemvelo, kufanele siqaphele. Okokuqala banake ilebula. Amathuluzi eyenzelwe abantu abanemizimba komzimba akufanele bagxila. Lena iphuzu elibaluleke kakhulu: ephansi lokuhlushwa izithako, cishe ukuthi lapho sihlala esikhunjeni, bephambana ukucasuka. Kungcono ukukhetha izingoma kokuba umbala ecacile noma elimhlophe, ngaphandle udayi futhi flavorings.
Ukunakekela ebucayi isikhumba ekhanda udinga ukunakwa. Ushawa nsuku zonke - lokhu likuvumela ukuthi ususe ezizihluphayo ebusweni ikhanda sivuselele ifilimu ovikelayo, okuyinto wadala emva ukuwasha.
Qiniseka ukufunda ngokucophelela ilebula. Ngokuvamile lokhu kubonisa okuyiwona ithuluzi yakhelwe. Kukhona ezinye ukudla Kunconywa ukuba sisetshenziswe kuphela izinwele ngokwazo. Abanye, kunalokho, enzelwe kuphela sezinwele. It tonics, serums kanye lotions.
ewusizo kakhulu nsuku zonke ukuze uhlikihla ekhanda enoboya. Lokhu kuzosiza ukuba ingalimali futhi kusho ngokulinganayo basakaza ngaphesheya kwamanzi ngayo.
Ideal for isikhumba ebucayi
Ukwahlulela ngokubukeka izibuyekezo eziningi, ukhetho ekahle iwukuba Shampoo "Natura Siberika" ngoba isikhumba ebucayi. It ayiqukethe i-sodium laureth sulfate, parabens futhi nodayi. izithako zemvelo ukuhlinzeka ukunakekelwa emnene, kukhanye yemvelo kanye nokuvikelwa ehlala njalo yalolu ekhanda.
I ngokulandelana, okuyinto ingxenye - ingenye amakhambi nephephile ukuthi ngomusa enakekela izinwele zakho. Ngokusho trichologists, lena i choice omuhle ngoba izinwele ababuthakathaka. "Natura Siberika" iqukethe licorice, okuyinto engokwemvelo yesivini isisekelo. Ngenxa wakhe, iqedwe ngokuphelele umphumela kuyacasula ekhanda.
Shono uchungechunge wezokwelapha uye wathandwa izinhliziyo abesifazane abaningi. "Siberika Ngiphakathi nendawo" uzuza abalandeli abasha nsuku zonke, njengoba ushintsho qualitative esimweni izinwele kwakho kube ngcono. Lokho okwakudingeka ukuze kukhokhwe imoto (400 ml) - ruble 375.
Sha Russian uqoqe lobuya wonke amaphuzu ezweni lethu elikhulu. Bonke uqinisekise ukuthi umkhiqizo uyakwazi ukubuyela izinwele zakho nobuhle kanye nezempilo. Inkampani eziklanywe kahle emaphaketheni, zingabantu stylish futhi ekhangayo. Sudsing lichaza ekwakheni muhle kakhulu, alwa ngayo buso uwoyela izinwele zingcolile, futhi izona okokuqala. Umbala esobala, ukuze uma Baqala ukukholelwa ukuthi kukhona ingxenye udayi namakha. Iphunga limnandi kakhulu, ehlathini.
Zikhona nezinye izinzuzo, sibonga ngalo abaningi zama ukusebenzisa imoto "Ngiphakathi nendawo" kusukela brand wathi. Anakho ukungaguquguquki obukhulu futhi ukonga uphethiloli ukusetshenziswa, kuba mylitsya ngokuphelele futhi kuphazamisa izinwele. Manual uncoma ukusebenzisa imoto kabili, kodwa kungenzeka ukuthi ungakwazi ukuphatha futhi ngesikhathi esisodwa. Okuhle kunakho konke ukuthi: izinwele ngeke ibukeke isithungu utshani, ngisho ngaphandle air conditioning.
manje Shampoo "Ngiphakathi nendawo" TM "Siberika" ithandwa kakhulu kuzo zonke izinhlobo Russian. Lokhu akusona isimanga uma ucabangela ukuthi lo msebenzi nje imilingo. Izibuyekezo ikakhulukazi batusa lokhu umugqa kwalabo abakufisela sivala mncane futhi athambekele okunamafutha. Ngaphezu kwalokho, ukuze zithole imiphumela emihle kunconywa ukuyeka ukudaya izinwele zakho bese ekhanda ukuze alulame. Ngokusebenzisa lolu imoto, ugeza izinwele zakho ziyoba lingandile kangako, ezimbili, noma ngisho kanye ngesonto.
Wella - ukwelapha nezinwele
Isimo curls yakho incike impilo izimpande, njengoba kuvela epidermis bathatha izakhamzimba. Wella imoto ngoba isikhumba ebucayi ikhanda has a action kathathu ngokushesha:
Ukuze amino acid kulandisa kunikeza anti-histamine, sizole.
izithako ezikhethekile uthuthukise isikhumba.
Panthenol obangela ngempumelelo isikhumba amafutha imoto golovyEto ukusetshenziswa nsuku zonke. Ukwahlulela ngumkhiqizi, umkhiqizo silungiselela kahle ekhanda emiphumeleni imikhiqizo izinwele ukunakekelwa. Izindleko - ruble 723.
Care by Wella
Kuyoba ephelele umphelelisi elangeni ngoba ekhanda ebucayi. Lokhu kuwukhulula ukulunywa, futhi ngokushesha kakhulu uzoqaphela ukuthi uxhumene ikhanda akusadingeki, kodwa sifuna ukuzijabulisa. Lotion ulungisa kahle isimo isikhumba. Ukulungiselela hlangothi, ayinaphunga ayiqukethe enobungozi izingxenye, colorants futhi flavorings, esingenakubalwa ngokuthi wusizo isikhumba ebucayi. Izindleko - ruble 758. Ukuze uthole umphumela esiphezulu, kutuswa ukusebenzisa buso ebuyisela isithiyo zemvelo ayisivikelo sezinwele. Ekugcineni, ibuye Kunconywa ukusebenzisa amandla serum ezizokhuthaza kwegazi futhi inikeza umsoco of izinwele, ekunciphiseni nezinwele.
ULonda Professional ezizwelayo sezinwele Shampoo
Lokhu imoto mnene, kuba okuyinto ncamashi ukuthi yini oyithandayo. Ngobumnene ehlanza izinwele futhi upholisa sezinwele. Ngokusho owesifazane Pretty ngemva abazisebenzisi lokujabulela ifilimu okunamathelayo izinwele noma sezinwele yobunzima. Leli thuluzi ekahle ukusetshenziswa ngemva kokuhlaselwa chemical on izinwele, kungaba imidwebo noma perms. Uma ngokuphuthumayo search imikhiqizo ukunakekelwa ephelele, sinake imoto "uLonda" ekhanda ebucayi. It siqukethe izingxenye ezimbili esiyingqayizivele:
uwoyela Jojoba esesikhundleni isinyathelo eqeda ukuvuvukala kanye Lentulo. It kalula lingena izimpande izinwele, uyasondla futhi moisturizes ama. Ngenxa yalokho, izinwele zakho ube fresh.
Chamomile akhiphe has elwa namagciwane kanye aduduzayo, futhi likuvumela ukuba zibulale amanxeba avele.
Intengo yaleli mkhiqizo ngempela yeningi - ruble 300 kuphela.
Shapun Dr.Jart +
Lokhu imoto ukusetshenziswa nsuku zonke, okuzokwenza ukuthatha indawo yayo efanele ku arsenal of amathuluzi for ukunakekelwa Yilowo nalowo muntu wesifazane. Ezingokwemvelo Kanye Nezenzo ephephile ngokuphelele, igcina umswakama esele sezinwele namandla, kunikeza umuzwa eside ka kwehlobo. izinwele zakho kuyoba ukukhanya futhi uzilungise. Ifomula iye eziklanyelwe imicu mncane. Shampoo unika amandla. Izinwele zakho lihle, izinwele zakhe impophoma yangempela sidilike emhlabeni kwamahlombe akhe. Ngenxa ezikhishwe of Aloe vera, uwoyela Jojoba futhi panthenol izinwele zakho ziyogcwala ukukhanya kukhanye. Ukwahlulela ukubuyekezwa, lokhu siyindlela olukhulu abanikazi ekhanda eziyinkinga.
Ungathenga lokhu imoto ukuze ekhanda e usokhemisi isikhumba ebucayi. Sici Its ehlukile - kuba phambi lichaza ekwakheni akhiphe we-quinine amavithamini yeqembu B. base Soft egeza has kuqinisela izimpande izinwele. Ukwakheka Yemvelo inikeza ukuhlanzwa mnene futhi ecwaninga. Umenzi uncoma ukusetshenziswa Klorane Shampoo zonke izinhlobo izinwele, kodwa ukufunda izibuyekezo, Ngifuna ukuxwayisa abathengi. Shampoo ivame ukuba ome izinwele ngibenze enemikhuba ukusetshenziswa kuba ehlonipheke kakhulu. Awungenile aneliseke eziyimbangela yalokhu? Khona-ke sincoma ukuthi sinake enye inketho.
Ngokuyinhloko-ke Kunconywa ekhanda ebucayi. Ukwakheka kwalo ngokuphelele ivikela izinwele kanye isikhumba obucayi ezishukumisa ezahlukene. Ngenxa yalokho, uthola i ecwaninga lula futhi umthamo omuhle. Ngokusho abathengi, Elution Dermo kahle ibekezelelwe ngisho nalapho esetshenziswa isikhathi eside. isizinda Soft egeza upholisa sezinwele acasuke futhi aqede izimpawu dermatitis incipient. Ukwakheka zinc wathi, okuyinto kweso kususa dandruff. Shampoo kuyinto ukonga kakhulu, kodwa kususa konke ukungcola kusukela ezikhathini ezimbili. Izinwele elithambile, voluminous futhi ucwebezela, kodwa Fluffy kakhulu. Uma uthanda olubushelelezi ephelele ke le ndlela akuyona ngawe, nakuba wonke umkhiqizo, nahlulele by ukubuyekezwa, okuhle kakhulu.
Shampoo "Ecolab" ngoba isikhumba ebucayi
Ukufunda ukwakheka, kakade uzizwe ukuthembeka imoto. Yemvelo base egeza - nekufakwa cornflower - akhiphe ahlanganiswe enhlaba vera futhi Mallow, uwoyela Jojoba kanye glycerin. Okungukuthi, 97% wabantu abasebenzayo - lawa izithako odabuka yemvelo. Ngo womshini esetshenziswa nezivimbelakuvunda zemvelo kuphela kanye colorants. Futhi ziyini izici umkhiqizo yezimonyo?
Aloe Vera moisturizes futhi upholisa isikhumba, kuvusa ukuvuselelwa zemvelo. Nakuba ekulondolozeni ukulinganisela amanzi elikhulu.
Mallow Sudanese kwehlisa nokuzwela kwesikhumba futhi ithambisa ke.
uwoyela Jojoba - kuba Ukuvikelwa ekahle kanye nokubuyiselwa izinwele ezilimele.
Fitoaromatichesky Shampoo Sisley
Lena enye imoto kakhulu ekhanda ebucayi. Izibuyekezo ukugcizelela ukuthi uzohlangana yisiphi isicelo. Kusho ngobumnene ehlanza izinwele futhi akusho ukuhlasela. Izinzuzo main:
imoto ifomula inikeza ivolumu, iphimbo kanye bukhanye.
Ukwakheka kuhlanganisa namafutha e-rosemary, okuyinto isikhumba aphulukise, chamomile, Uphinde agibele futhi Kockum, obomvu noma umango.
ukuthungwa Ngokucophelela, elikhishiwe kwezinye izinguqulo isakhiwo izinwele.
Ithuluzi ephelele ukusetshenziswa njalo.
umkhiqizo Excellent akhiqizwa Finland. Shampoo hlangothi, iqukethe akukho ngamakha, udayi futhi silicones. Union allergists Finland isikhathi eside wamnika isibonakaliso non-allergenic. Perfect for wonke umndeni. Ikakhulukazi ezinconywe ithuluzi labo abanesikhumba izwela kakhulu kangangokuba asifanele amashampu wakhe ezivamile. Ideal for abanikazi ekhanda ezomile futhi ebucayi ukuthi uthambekela flaking. Ukwahlulela ukubuyekezwa, egeza ikhanda ezizwelayo ehlanzekile esasile kakhulu.
Emakethe namuhla amashampu eziningi, ngakho izinqumo kungaba ngempela eziyinkimbinkimbi. Abaningi bathi efika kuqala imoto ephelele a pomyvok embalwa ingase avuse ukulunywa nezinye izinkinga. Isizathu salokhu kuyinto ukusabela iguliswa amakhemikhali kufakwe Ukwakheka yokuwasha. Ngakho-ke, kukhona okukhiphayo ezimbili. Eyokuqala - akukuhle kakhulu: uthenga amashampu ezimbalwa bese ugcine ekushintsheni ukuba enye. Njengoba isikhumba akanayo isikhathi ukujwayela, futhi izingxenye kwakhiwa ingxenye neutralized ngezithukuthuku omunye.
Eyesibili inketho - iwukuba ekuqaleni ukuthenga kuphela amathuluzi engcono. Okokuqala kubalulekile ukukhetha abakhiqizi omethembayo futhi silitadisha ngokucophelela kwengoma. izithako zemvelo (kakhukhunathi akhiphe panthenol, uwoyela Jojoba) - ilungele abanikazi ekhanda ebucayi.
Yiqiniso, iningi izindleko of amashampu professional kulolu chungechunge impela high. Nokho, kufanele ukukhetha omkhulu - kuba imoto Russian "Ngiphakathi nendawo" kusukela "Siberika". Ngokusho abathengi, kusho yena manje eyodwa inombolo hhayi kuphela e-Russia, kodwa kulo lonke izwe elaliyiSoviet Union ngaphambili.
Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa, ngisho ukusetshenziswa kuphela omunye imoto, ngaphandle ezihilela imali eyengeziwe for ukunakekelwa, ungakwazi uyifinyelele imiphumela amazing. Ngokuphelele zinyamalale dandruff, ekhanda hydrated ngokuphelele futhi avikelwe, futhi ngenxa yalokho, izinwele uthole nice akhanye, olubushelelezi futhi kuyaqina. Kumele wenze isinyathelo esisodwa kuphela - ukuthenga lo mkhiqizo futhi radovatsya kwekhanda elihle. Futhi into eyodwa ngaphezulu. Ukuze alondoloze umphumela, kubalulekile ukuba usebenzise elinye njalo, ngoba ushintsho njalo imoto Akukuhle ukuba izinwele zakho njalo.
Ukutayela izinwele. Isitayela Izinwele "Roventa"
Amagama zezinwele madoda
Indlela yokwenza ngekhanda nge-bandage?
Ukwakhiwa Professional izinwele "Inoar". Yi-keratin izinwele Ehlala: imiyalelo, ukubuyekezwa
Njengoba izinwele amakhorali ne-hydrogen peroxide? Ikhaya Beauty Salon
Salinda salokhu engu-25: konke okudingayo ukuze ukwazi mayelana inkathi entsha akukhuthazwa ewuchungechunge yethelevishini "Twin Peaks"
Mushroom Veselka futhi isebenza imithi
Kanjani ukufeza impumuzo amaphethini spokes? amathiphu
I-career kanye nempilo yakho: Svetikova Svetlana Andreevna
Yingakho kukhona ukuncinza kule ingquza
Yiziphi izinyathelo sehlukaniswe ukuphila komuntu? Ehola umsebenzi zonke izigaba
Lokhu amabele amancane ezikhangayo
Salad "Rose": iresiphi. Indlela ukulungiselela isaladi "Rose"?
Imbali esiyinqaba. imibala UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki: 10 eziphezulu
Usuku luka-Valentine: The best isipho imibono